Sawirro: Ninka 26 qof kaniisasada Texas ku laayay oo ka tirsanaan jiray ciidamada cirka US – Warfaafiye:
Sawirro: Ninka 26 qof kaniisasada Texas ku laayay oo ka tirsanaan jiray ciidamada cirka US
Ali Mohyadin Nov 6, 2017 0
Nin horay ugu tirsanaan jiray ciidamada cirka Mareykanka ayaa 26 qof ku dilay kaniisad ku taal gobolka Texas, wuxuuna dhaawacay in ka badan 20 qof.
Devin Patrick Kelley oo 26 jir ah kana tirsanaan jiray ciidamada cirka Mareykanka oo laga eryay 2014-kii ayaa markii uu falkaan geysanayay ku hubeysnaa qoriga AR-15, wuxuuna rasaas ku furay dadkii kaniisada ku cibaadeysanayay axadii.
Kaniisada oo ku taalla Sutherland Springs oo ah magaalo yar oo ka tirsan deegaanka Wilson ayaa dadka ku dhintay waxaa ku jiray 8 qof oo isku qoys ahaa iyo caruur aad u yar. Ninkii looga shakisnaa weerarkan ayaa markii dambe la helay isaga oo mayd ah oo ku jira gaarigiisa oo yaalla meel dhawr kiiloo mitir u jirta kiniisadda.
Labo nin oo deris la ahaa kaniisada, oo lagu kala magacaabo Stephen Willeford, 55, and Johnnie Langendorff ayaa ceyrsaday ninkaan falkaan geystay, iyagoona helay qorigii uu dadka ku xasuuqay, waxaana loo maleynayaa inuu u dhintay rasaas ay ku tureen halka ay dhici karto inuu u dhintay shil ka dhashay gaarigii uu waday oo ku socday xawaare sareeya. Devin Patrick Kelley ayaa la sheegay in markii laga eryay ciidammada cirka ee Maraykanka sannadkii 2014kii maxkamadda ciidammadu ay ku heshay in uu tacadi u gaystay xaaskiisa iyo ilmo oo uu dhalay.
Barasaabka gobolka Texas ayaa xaqiijiyay tirade dhimashada wuxuuna sheegay in ay tahay toogashadii ugu khasaaraha badnayd ee taariikhda gobolka.